ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံများ
ခွဲရုံအမည် အမ်ဗွီအေ တည်နေရာ
၂၃၀ကေဗွီ ဝါးတရာ-(ရွာမ-လှိုင်သာယာ)ဓာတ်အားလိုင်း (၈)မိုင်နှင့်
ဝါးတရာဓာတ်အားခွဲရုံ Switchbay ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်နှင့် ထန်းတပင်မြို့နယ်
၂၃၀ကေဗွီ ဝါးတရာ-လှော်ကားဓာတ်အားလိုင်း (၁၀)မိုင်နှင့်
Switch Bay တိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်း
၃ ၂၃၀ကေဗွီ ခနောင်တိုခွဲရုံစီမံကိန်း ခနောင်တိုဓာတ်အားခွဲရုံ Switchbay
(၁) ၂၃၀ကေဗွီ ဝါးတရာ-(ရွာမ-လှိုင်သာယာ)ဓာတ်အားလိုင်း (၈.၀၄)မိုင်နှင့် ဝါးတရာဓာတ်အားခွဲရုံ (တိုးချဲ့)တည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်း
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် ထန်းတပင်မြို့နယ်
(က) ဓာတ်အားလိုင်း - တာဝါ (၄၀)တိုင်၊ (၈.၀၄)မိုင်
(ခ) ဓာတ်အားခွဲရုံ - 230kV Switch Bay (2) Bay
၃။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုအခြေအနေ - စီမံကိန်းလက်ကျန်ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း
( စီမံကိန်းမန်နေဂျာ (၁) + (မြို့ပြ)) (တောင်ပိုင်း)
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ် - (၁.၂.၂၀၁၈)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - ဓာတ်အားလိုင်း - ( ၁၀၀ % )
T-3 toT-13 ကြိုးဆွဲပြီး
ဓာတ်အားခွဲရုံ - ( ၁၀၀ % )
(၂၁.၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ပြီး
(၂) ၂၃၀ကေဗွီ ဝါးတရာ-လှော်ကားဓာတ်အားလိုင်း (၁၀) မိုင်နှင့် Switch Bay တိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်း
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
230kV Switch Bay (ဝါးတရာခွဲရုံ) - (2) Bays
230kV Switch Bay (လှော်ကားခွဲရုံ) - (2) Bays
230kV Line - (၁၀) မိုင်
စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ (ပစ္စည်း) - 38/DPTSC(PTP)/2019-2020 (3.6.2020)
ကုမ္ပဏီအမည် - Khin Maung Nyunt Trading Co., Ltd.
စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ (ဖောင်ဒေးရှင်း၊တိုင်ဆင်) - 78/DPTSC(PTP)/2020-2021 (7.10.2021)
ကုမ္ပဏီအမည် - Zeya & Associates Co., Ltd.
- စီမံကိန်းမန်နေဂျာ(၁၊ မြို့ပြ)၊ (တောင်ပိုင်း)
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၇.၁၀.၂၀၂၁)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၆.၁၀.၂၀၂၃)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - လိုင်းအူကြောင်းတိုင်းတာခြင်း - ၁၀၀ %
မြေစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်း - ၅၅%
မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်း - T-30,31,32,33,34 -100% ပြီး။
ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ငန်း - T-30,31-100% ပြီး။
တာဝါတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း - ၀ %
၂၃၀ကေဗွီ လှော်ကား-ဝါးတရာ ဓာတ်အားလိုင်း ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ငန်း
(၃) ၂၃၀ကေဗွီ ခနောင်တိုခွဲရုံစီမံကိန်း
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဆိတ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်
ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း - ရှေ့မျက်နှာစာအုတ်ခြံစည်းရိုး(၂၅၁၀)ပေနှင့် မိန်းဂိတ်တံခါး
ဘေးနှစ်ဖက်နှင့် နောက်ကျောဖက် သွပ်ဆူးကြိုးကာရံခြင်း(၆၆၂၀)ပေ
စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ (တည်ဆောက်ရေး) - 81/DPTSC(PTP)/2020-2021 (29.9.2021)
ကုမ္ပဏီအမည် - Power Heaven Co.,Ltd.
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၂၉.၉.၂၀၂၁)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၂၈.၉.၂၀၂၃)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (87%)
၂၃၀ကေဗွီ ခရမ်း(သုံးခွ) – (သန်လျင်-ကမာနတ်)ဓာတ်အားလိုင်းအဝင်/အထွက် (၂)မိုင်နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံ
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ သုံးခွမြို့
230kV Line Bay - (4) Bays
230kV Bus Coupler - (1) Bay
230kV Transformer Bay - (2) Bays
230kV Measuring Bay - (2) Bays
230kV Single Phase Transformer - (6) Nos
33kV Line Bay - (10) Bays
33kV Transformer Bay - (2) Bays
33kV Measuring Bay - (2) Bays
33kV Bus Section Bay - (1) Bay
E-Type - (1) No
230kV Line (အဝင်/အထွက်) - (၂) မိုင်
စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ (ပစ္စည်း) - 87/DPTSC(PTP)/2019-2020 (15.6.2020)
စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ - 77/DPTSC(PTP)/2020-2021 (24.9.2021)
(Switchyard Foundation & E-Type Building)
ကုမ္ပဏီအမည် - အထင်ကရ ကုမ္ပဏီများအုပ်စု
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ(၁၊ မြို့ပြ)၊ (တောင်ပိုင်း)
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၂၄.၉.၂၀၂၁)
(Switchyard Foundation & E-Type Building စာချုပ်အရ)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၂၃.၉ .၂၀၂၃)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - ဓာတ်အားခွဲရုံ - Control Building (100%)
Switchyard Foundation ( 51.76 % ) E-Type ( 22.96 % )
- ဓာတ်အားလိုင်း Survey(10%)
(၄) ၂၃၀ကေဗွီ လှော်ကား -အရှေ့ဒဂုံ ဓာတ်အားလိုင်း (၁၃)မိုင်တည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်းနှင့် ၂၃၀ကေဗွီ လှော်ကားဓာတ်အားခွဲရုံတွင်
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
(က) ဓာတ်အားလိုင်း - (၁၃) မိုင်
(ခ) ဓာတ်အားခွဲရုံ - 230kV Switch Bay (လှော်ကား)(2) Bay
စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့်ရက်စွဲ (ပစ္စည်း) - 86/DPTSC(PTP)/2019-2020(15.6.2020)
စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ(ဖောင်ဒေးရှင်း၊တိုင်ဆင်) - 80/DPTSC(PTP)/2020-2021 (24.9.2021)
ကုမ္ပဏီအမည် - IGE Power Co., Ltd.
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၂၄ . ၉ . ၂၀၂၁)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၂၃ . ၉ . ၂၀၂၃)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - ဓာတ်အားလိုင်း - Survey(၁၀၀%)
(၅) ၅၀၀ကေဗွီ ဘုရားကြီး-လှိုင်သာယာလိုင်း (၅၆.၈)မိုင်
၁။ တည်နေရာ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂။ လုပ်ငန်းပမာဏ ဓာတ်အားလိုင်း တိုင်အမှတ်( ၅၅ ) မှ တိုင်အမှတ်(၁၄၉)အထိ (Survey အတည်ပြုပြီး ) (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း)
စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ (တည်ဆောက်ရေး) - 3/DPTSC(PTP)/2019-2020 (၁၈.၁၂.၂၀၁၉)
ကုမ္ပဏီအမည် - Mitsubishi Coporation Co., Ltd
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၁၆.၁.၂၀၂၀)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၁၅.၇.၂၀၂၂)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - Row of Way
(၆) ၅၀၀ကေဗွီ လှိုင်သာယာဓာတ်အားခွဲရုံ
၁။ တည်နေရာ - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်
၂။ လုပ်ငန်းပမာဏ - 500/230/33 KV ,2x 500MVA ဓာတ်အားခွဲရုံ
စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ - 91/DPTSC(PTP)/2019-2020(၁၆.၆ .၂၀၂၀ )
ကုမ္ပဏီအမည် - Sojitz Corporation
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - ( ၁၆ . ၆ .၂၀၂၀ )
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - ( ၁၅ . ၆ .၂၀၂၃ )
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - ခွဲရုံမြေနေရာသန့်ရှင်းခြင်း - 90%
၂၃၀ကေဗွီ ဝါးတရာ-လှော်ကားဓာတ်အားလိုင်း (၉.၃) မိုင်နှင့် Switch Bay တိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်း
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်း - (10)တိုင် (20%)ပြီး
ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ငန်း - (10)တိုင် (20%)ပြီး
တာဝါတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း -0%
၂၃၀ကေဗွီ လှော်ကား -အရှေ့ဒဂုံ ဓာတ်အားလိုင်း (၁၃)မိုင်တည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်းနှင့် ၂၃၀ကေဗွီ လှော်ကားဓာတ်အားခွဲရုံတွင် Switch Bay တိုးချဲ့ခြင်းစီမံကိန်း
(ခ) ဓာတ်အားခွဲရုံ - 230kVSwitch Bay (လှော်ကား)(2) Bay
၄။ လုပ်ငန်းစတင်သည့်နှစ်(စာချုပ်အသက်ဝင်သည့်ရက်စွဲ) - (၂၄ . ၉ . ၂၀၂၁)(ဖောင်ဒေးရှင်း၊တိုင်ဆင်စာချုပ်အရ)
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - (၂၃ . ၉ . ၂၀၂၃) (ဖောင်ဒေးရှင်း၊တိုင်ဆင်စာချုပ်အရ)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - IGE Power Co.,Ltd မှ(3.6.2022) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်-IGEP/ICD/DPTSC(PTP)/0622/076/10 ဖြင့်ဓာတ်အားလိုင်းအူကြောင်းပြောင်းလဲရန်တင်ပြထားပါသည်။
၅၀၀ကေဗွီ ဘုရားကြီး-လှိုင်သာယာလိုင်း (၅၆.၈)မိုင်
စာချုပ်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ(တည်ဆောက်ရေး- 3/DPTSC(PTP)/2019-2020 (၁၈.၁၂.၂၀၁၉)
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - မြေတူးခြင်း-(95)တိုင်တွင်(9)တိုင်(9%) ပြီးစီးဖောင်ဒေးရှင်း- (95)တိုင်တွင်(6)တိုင်(6%)ပြီးစီး
၅။ လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်နှစ် (ခန့်မှန်း) - ( ၁၅ . ၆ . ၂၀၂၃ )
၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - Switchyard သဲဖို့ခြင်းနှင့် Switchyard
ပတ်လမ်းအားမြေဖို့ခြင်း - 29.5%